Thu, Aug 13, 2020 | 22:51:56 NST
त्यहाँ देखि तपाईंहरूले सम्पर्क नम्बर त दिनुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ ठूलो कुरा गर्दै उल्टो पैसा खाएर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेको हुन्छ। कतारमा पनि यस्तै घटना भएको छ। कम्पनीले तलब नदिएपछि दूतावासमा सम्पर्क गर्दा दूतावासको कर्मचारीले कम्पनीको मुदीरसँग घुस लिएर अप्ठ्यारोमा परेको छन्। कामदारलाई स्वदेश फिर्ता हुन चाहदा पनि नदिएको र काम नदिइकन राखेका छन्। यस प्रति कसैले ध्यान नदिएको बताएका छन् उक्त कामदारहरुले।
जेम्स बिश्वकर्मा / कतार
म्यानपावरको झुठो आश्वनसनको कारणले नेपाली कामदारले साउदीमा धेरै नै समस्या भोगिरहेका छन्। म पनि त्यस्तै समस्यामा छु। मलाई सेलेसम्यानको काम भनेर पठाएको थियो तर यहाँ आएर फ्याक्ट्रिमा काम गर्नु परिरहेको छ। म्यानपावरलाई भन्दा कम्पनीले जे लगाउछ त्यही गर्नु पर्छ भन्छ। सरकारले अनुगमन गरे राम्रो हुन्थ्यो होला।
फजरुल्लाह अन्सारी / साउदी अरेबिया
नियम कानून आफ्नो स्थानमा छ तर त्यो धेरैजसो कम्पनीले पुर्ण रूपमा लागू गर्दैनन्। कतिपय कुराहरुमा हामी अन्यायमा परेको थाह पाउँदा पाउदैपनी सम्झौता गरेर बस्नु परेको छ। अधिकारका कुरा गर्‍यो कि पेल्न थाल्छ र विभिन्न लाल्छना लगाएर फिर्ता पठाउनेसम्मको हत्कण्डा अपनाउन सक्छ। यो समस्या मेरो सेक्युरिटी गार्ड कम्पनीमा मात्र नभएर अधिकाम्स कम्पनीमा छ।
कृष्ण भट्टराई / युएई
साफरी मलमा गएको थिए हिजो एक क्रेट अन्डा को २९ रियल पुगेछ। बढिमा १५ रियाल हुनुपर्ने हो ।अलमराईको दूध, दहिको र्‍याक खाली छ। बाकी सामन्य नै छ। आत्तिनु पर्ने आबस्था छैन।
आईत बहादुर थापा मगर / कतार
वाक्रामा चाहि स्थिती सामन्य नै छ। लुलु क्यरिफोरमा चाहि अनावश्यक हल्लाले गर्दा सामान धेरै बिक्री भएकोले अलि पाउन मुस्किल भाएकोछ। त्यो पनि भोलिपल्ट सामान्य हुन्छ। हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाइ आग्रह गर्छु।
सुमन तिवारी / वाक्रा, कतार
खासै असर परेको देखिदैँन हिजो जस्तो हो आजपनी उस्तै छ। अली सुपरमार्क्रेट तिर सामान जोहो गर्नेको भिडभाड देखिन्छ। अब दुई चार दिन पछिको अबस्था कस्तो आउछ भन्न सकिन्न। जो जती नेपाली हुनुहुन्छ अलि सतर्कका साथ रहनुहोला।
सुमन कोइराला/ कतार
सामान्य स्थिति छ आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। सोसल मिडियामा अनावश्यक टिप्पणी गरेर जनता त्रसित गर्ने काम नगर्नुहोस्। कतारमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईंहरु धैर्य गरि बस्नुहोस्। डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन्। यहाँको शान्ती सुरक्षा धेरै राम्रो र ब्यबस्थित छ !
अचिन अच्युत / कतार
म कतरकै एक सुपर मार्केटमा कार्यरत छु, हिजो केही ग्राहकहरुको भिड बडेको भएपनी आजबाट स्थिति सामन्य भएको छ। महङ्गि नबढ्ने बिषयमा अहिलेलाई ढुक्क भए हुन्छ। विभिन्न हल्लाहरुको पछि नलाग्नुहुन भन्न चहान्छु।
मनोज कुमार चोङ्वाङ / कतार
हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै सामान्य छ। हिजो रित्तियका सामान रात भरी तेस्रो मुलुक टर्कीबाट ल्यायर सुपरमार्केट भरी भराउ नै छन् ।
मजबुर खान / कतार
कतारमा स्थिति सामान्य छ। केही प्रभाव परेको छैन। यहाँ नेपाल जस्तो कालो बजार चैल्दैन। फिक्स्ड रेट हुन्छ। खासै असर पर्ला जस्तो छैन। हिजो नै आन्तरिक मन्त्रालयले सामुन्द्रीक बाटो हुँदै ६०% समान आउने हुनाले कुनै समस्या नहुने बताएको छ। त्यस्मा पनि खाद्यान्न प्राय पाकिस्तान ,भारत अनि बङ्गलादेशबाट आउने हुन्छन।
शोभाकान्त पोखरेल/ कतार
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको प्रमुख समस्या भनेको नेपाली दूतावास हो। दूतावासले आफ्नो कामलाई प्रथामीकता नदिदा हामीलाई झन धेरै समस्या पर्नेगरेको छ। हाम्रो कुराको सुनुवाइ नहुदा हाम्रो अन्तीम बिकल्प भनेको मिडियामा जानु हो। यस्तो अवस्थामा हामीसँग प्रमाण र आधार भए दूतावासलाई कार्वाही गर्न किन सकीदैन?
बिकाश कटुवाल / उदयपुर (हाल साउदी अरेबिया)
नेपालबाट नयाँ आउने कामदारहरुलाई कामकोबारे साधारण ज्ञान सम्म नहुनु अनि पुरानाले पनि वास्ता नगर्नु, सानो सानो कुरामा रिस देखाउनु, कुरा नबुझी निष्कर्श निकाल्नु, क्यान्सल जान्छु भन्नु, जिम्मेवारीको वोध नहुनु, झै-झगडा, रक्सि, तास र पर स्त्रिसँग सम्बन्ध बढाउनु आदिले गर्दा सबै नेपाली कामदारमाथि नै प्रश्न चिन्न उठ्ने गर्दछ।
धन बहादुर बुढाथोकी / कतार
नेपालमा त सरकार नै छैन भन्दानि हुन्छ। यदि भएको भए त म्यानपावरका दलालहरुले किन मनपरी गर्थे र ? जवकी खाडी मुलुकमा जानको लागी फ्री भिसा फ्री टिकट अनि जम्मा दश हजार रुपैयाँ तोकेकोमा मान्छे बेच्न पल्केका दलालहरुले खाडी मुलुक अन्तरगत संयुक्त अरब इमिरेट्स अबुधाबिको पि.एस.बि.डी.सेक्युरिटी गार्डको लागी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिरहेकाछ्न्। यो सरासर सरकारको आँखामा छारो हालेको भएन र ? यदि हाम्रो देशमा सरकार छ भने अबिलम्व त्यस्ता म्यानपावर भनाउँदा दलालहरु उपर छानबिन गरी कार्वाही होस्।
देब सल्यानी देबु
मरुभुमिको यो तातो घाममा दिनभरी गैती र बेल्चा हान्नुपर्छ। न त भने जस्तो खान पाइन्छ न थकाइ लाग्यो भनेर थकाइ नै मार्न पाइन्छ। खाना पनि बासिभात खानुपर्छ। नत राख्ने ठाउँ छ ल्याएर एउटा खजुरको बोट मुनि राखेर काम थाल्नुपर्छ। भरे खाने बेलामा त्यो तातो घामले गजज्ज पानी आइराखेको हुन्छ। बाध्यता, त्यसैलाइ पानी हालेर पखालेर खानुको बिकल्प अरु केनै छ र? खुन र पसिनामा निथ्रुक्क भिजेर यो दुःखी जीवन यस्तै छ। यस्तो परिश्रम गर्ने हो भने त हाम्रो देशमा सुन फलाइन्छ। जय मार्तीभुमी।
म युरोपको इटली आएको चार बर्ष भयो। सोचे जस्तो काम नपाएर बाच्नै मुश्किल भइरहेको छ। बस्न खान मात्रै नेपाली ४०-४५ हजार लाग्छ। अहिले आएर लाग्छ कि नेपालमै मेहनेत गर्दा हुने थियो बरु। के गर्नु विदेशको जिन्दगी। युरोपमा त सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोचेको थिए।
किरण थापा /इटहरी (हाल इटली)
खनाइदैछ श्रम खाड़ीको देशमा, सबै सोच्छन सुन फल्छ विदेशमा, नेपालमा पैसा हैन श्रम सम्मानको खाँचोंछ, विदेशमा पसीना बग्दैछ तर मातृभूमि बाझो छ।
राकेश लुइटेल / भक्तपुर
हामी नेपाली कामकालागि खाडी जान्छौं । जहाँ जान सरकारले फ्रिः भिसा फ्रिःटिकटको व्यवस्था गरेको छ। तर म्यानपावरले ठगि गरि धेरै पैसा लिने गरेको छ। हामीहरुलाई विदेश पठाउन सरकारले नै व्यवस्था गरे हुदैन र? यदि यसो गरेमा धेरै नेपालीहरु ठगिबाट जोगिने थिए कि?
रुद्रबहादुर बिक/ दाङ